सेना छाड्ने बेलायती बढे- विश्व - कान्तिपुर समाचार
सेना छाड्ने बेलायती बढे
माघ २६, २०७५ नवीन पोखरेल
लन्डन — बेलायती सेनामा भर्ती हुने ब्रिटिस नागरिकहरूको संख्या घटेको छ । बेलायती सेनाका अनुसार गत वर्ष ८ हजार भन्दा बढी सैनिकले जागिर छाडेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदको प्रतिरक्षा समितिका सदस्य मार्क फ्रांस्वालाई यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन समेत दिएकी छन् । गत वर्ष बेलायतले १३ हजार सैनिक भर्ती गरेको थियो ।
मार्कले आम्र्ड फोर्सेसमा धेरै मानिस सहभागी गराउन आवश्यक भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री मेले यसको सुधारका उपायका लागि अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । सेनाले भर्तीमा सघाउन निजी क्षेत्रको एक कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि भर्ती हुनेको भने संख्या बढ्न नसकेको समाचारमा जनाइएको छ । बेलायतभित्रै सेनाको जागिरको आकर्षण घटदै गए पनि नेपाली युवाको आकर्षण बढदै गएको छ ।
यस वर्ष नेपालबाट भर्ती भई बेलायत आउने युवाको संख्या समेत वृद्धि हुने जनाइएको छ । सन् २०१९ का लागि बेलायती सेनाको गोर्खा ब्रिगेडका लागि नेपालमा भर्ती भने सकिएको छ । ‘दि फोर्सेस टिभी’ ले जनाएअनुसार झन्डै १० हजार नेपाली युवाले गोर्खा भर्तीका लागि विभिन्न चरणको छनोटमा भाग लिएका थिए । पोखरामा गरिएको अन्तिम छनोटमा ४ सय जना छनोट भएका छन् । जुन ३४ वर्ष यताकै सबभन्दा बढी हो ।
छनोटमा २५ किलो बालुवा भरिएको डोको नाम्लोले बोकेर पहाडमा ५ किलोमिटर पार गर्ने कठिन चरण थियो । २५ किलो बालुवा डोकोमा राखेर पहाड पहाड दौड्ने परीक्षा भर्ती छनोटमा सबैभन्दा कठिन र डरलाग्दो ठानिन्छ । डोको दौड सन् १९८९ देखि मात्र ल्याइएको हो ।
हाल झन्डै ३ हजार नेपाली बेलायती सेनामा छन् । बेलायती सेनामा गोर्खाका परिचित नेपाली सन् १८१५ देखि प्रवेश गरेका हुन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसहित अन्य कैयौं महत्त्वपूर्ण लडाइँमा ४३ हजार भन्दा बढी गोर्खाले ज्यान गुमाएका र हजारौं घाइते भएको इतिहास छ । यसबीचमा १३ जना गोर्खालाई सम्मानसहित साहसिक पदक भिक्टोरिया क्रस (भिसी) प्रदान गरिसकिएको छ ।
सेवारत गोर्खाहरूले बेलायती सैनिकसरह तलब र सेवा सुविधा पाए पनि निवृत्त भइसकेपछिको सेवा सुविधाबारे बेलायतले आफूहरूमाथि भेदभाव गरेको भन्दै आन्दोलनरत छन् । समान पेन्सन अलावा क्षतिपूर्ति र अन्य सेवा सुविधा हुनुपर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग छ ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०९:२३
नेपालीलाई कम उमेरमै क्यान्सर
स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन लगाएर बर्सेनि साढे १७ हजार नेपालीलाई क्यान्सरबाट जोगाउन सकिन्छ
माघ २६, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — क्यान्सर घातक रोगमध्ये एउटा हो । हाम्रो मुलुकमा अहिले ५५ हजारदेखि ६० हजारबीचमा क्यान्सर रोगी भएको अनुमान गरिन्छ । हाम्रो मुलुकमा हरेक वर्ष यो दीर्घ रोगका करिब ३५ हजार नयाँ रोगी थपिने गरेका छन् तर यो थाहा पाएर अतालिइनहाल्नुपर्ने कुरा के छ भने तीमध्ये साढे १७ हजार पीडितलाई क्यान्सर लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ, बर्सेनि ।
स्वस्थकर जीवनशैली अपनाएर हाम्रा परिवार सदस्यलाई दीर्घ जीवन दिन सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि बताउँदै आएको छ– क्यान्सरका ३०–५० प्रतिशतसम्म केसलाई जीवनशैलीमा स्वस्थकर परिवर्तन गरेर रोकथाम गर्न सकिन्छ । अमेरिकास्थित नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युट (एनसीआई) का अनुसार तमाखुको उपयोग, अनुपयुक्त खानपान/जीवनशैली, केही यौन व्यवहार, वातावरणमा भएका क्यान्सर उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिमका कारक तत्त्वहरूबाट बचेर यो रोग लाग्नबाट उम्किन सकिन्छ ।
‘हामीकहाँ पाइएका मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्यान्सरबाट आहार र जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन गरेर बच्न सकिन्छ,’ नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष एवं क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुदीप श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही दशकयता नेपालमा समेत क्यान्सर बढ्दो छ ।’
डब्लूएचओका अनुसार क्यान्सरले हुने करिब एक तिहाइ मृत्यु पाँच प्रमुख व्यवहार र आहारसम्बन्धी जोखिमले गर्दा हुन्छ । तमाखु र मदिरा उपयोग, उच्च बडी मास इन्डेक्स, शारीरिक सक्रियतामा कमी, फलफूल र सागसब्जीको न्यून सेवन त्यस्ता कारक हुन् ।
क्यान्सरका कारण हुने करिब २२ प्रतिशत मृत्युको जिम्मेवार तमाखुको उपयोग हो । यस्तै हयुमन पापिलोमा भाइरस (एचपीभी), हेपाटाइटिसजस्ता संक्रमणसमेत निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमा २५ प्रतिशत क्यान्सरका लागि जिम्मेवार मानिन्छन् ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल (बीपीकेएमसीएच), भरतपुरको क्यान्सर रोकथाम नियन्त्रण तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख भोला सिवाकोटी भन्छन्, ‘सकारात्मक जीवनशैली, क्यान्सर उत्पन्न गर्ने संक्रमणविरुद्घ खोप, स्वस्थकर खानपान, स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आदि अपनाएर विदेशको दाँजोमा नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्यान्सर रोगबाट बचाउ गर्न सकिने अवस्था छ ।’
पहिले विकसित मुलुकमा बढी क्यान्सर हुने गरे पनि अब नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा समेत बढ्दो सहरीकरण, प्रदूषण, नकारात्मक जीवनशैली, विषादी आदिको प्रयोगलगायतका कारण बढिरहेको छ । ‘हामीले क्यान्सरको बचाउतर्फ ध्यान दिएनौं,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले यो घातक रोग अहिले बढ्दो क्रममा छ ।’
डब्लूएचओका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा क्यान्सर मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारक हो । सन् २०१८ मा अनुमानित ९६ लाख मृत्युका लागि क्यान्सरलाई जिम्मेवार मानिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा छमध्ये एउटा मृत्यु क्यान्सरले गर्दा हुन्छ तर हालका दिनमा क्यान्सरले हुने ७० प्रतिशतजति मृत्यु निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमा हुने गरेको छ ।
इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार हाम्रो मुलुकमा हुने मृत्युका कारकमध्ये करिब ९ प्रतिशत विभिन्न क्यान्सरले हुने गर्छ । २०२१० सम्म यो बढेर १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।
अस्पतालमा भएको २००३ देखि २०१२ सम्मको दर्तालाई आधार मानेर हेर्दा नेपालमा तीन वटा प्रमुख क्यान्सर रहेको पाइन्छ– फोक्सोसम्बन्धी क्यान्सर १४.५ प्रतिशत, पाठेघर मुखको क्यान्सर ११.२ प्रतिशत र स्तन क्यान्सर ८.४ प्रतिशत ।
पश्चिमा मुलुकमा भन्दा नेपालमा १०–१५ वर्षअगावै क्यान्सर
केही खास प्रकारका क्यान्सर पश्चिमा मुलुकको दाँजोमा नेपालमा एकडेढ दशकअगावै पाइने गरेको छ ।
कम उमेरमै हुने यस्तो क्यान्सर आक्रामक हुन्छ । निको हुन गाह्रो हुने र पहिचान गर्न पनि धेरै ढिलो हुने खालको हुन्छ ।
‘पश्चिमा मुलुकका मानिसमा ५०–६० वर्षको उमेरमा लाग्ने केही क्यान्सर नेपालीहरूमा ३०–४० वर्षकै उमेरमा पाइन थालेको छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पित्तथैली (गल ब्लाडर), पाठेघरको मुख, स्तन, ठूलो आन्द्रा, आमाशयलगायतका क्यान्सर पश्चिमाहरूमा नेपालीलाई भन्दा १०–१५ वर्षपछि मात्र हुने गरेको पाइएको छ ।
के हो क्यान्सर ?
शरीरको कुनै पनि खण्डलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्यान्सर रोगको एउटा ठूलो समूहको सामान्य नाम हो । हाम्रो शरीरका सबै अंग कोषले बनेका हुन्छन् । तीव्र गतिले बढ्ने असामान्य कोषिकाले गर्दा क्यान्सर हुन्छ ।
क्यान्सर ‘कोषिका’ मा सुरु हुन्छ । सामान्यत: शरीरले हामीलाई आवश्यकता भएअनुसार मृत पुरानो कोषिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कोषिका निर्माण गर्छ तर कहिलेकाहीं यो प्रक्रिया गलत हुन्छ । नयाँ कोषिका त्यतिखेर समेत बढ्दै जान्छ, जब हामीलाई त्यसको आवश्यकता हुँदैन । अर्कातिर, पुरानो कोषिका जतिखेर मर्नुपर्ने हो, त्यतिबेला मर्दैन । यसले अतिरिक्त कोषिकाको एउटा थुप्रो बनाउँछ, जसलाई गाँठो अर्थात टयुमर भनिन्छ तर सबै असामान्य वृद्घि वा गाँठो क्यान्सर भने हुँदैन ।
यस्तो टयुमर ‘बिनाइन’ अर्थात् सामान्य र ‘मेलिग्नेन्ट’ अर्थात घातक गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । क्यान्सरयुक्त गाँठोलाई मेलिग्नेन्ट र क्यान्सररहित गाँठोलाई बिनाइन गाँठो भनिन्छ । बिनाइन अर्थात सामान्य गाँठो क्यान्सर होइन । मेलिग्नेन्ट अर्थात घातक गाँठोबाट कोषिकाले छेउछाउका तन्तुमा आक्रमण गर्न सक्छ । यस्तो बेला यो टुक्रिन सक्छ र शरीरका अन्य भागमा फैलिन पनि सक्छ ।
एनसीआईका अनुसार क्यान्सरका एक सयभन्दा बढी प्रकार हुन्छन् । सामान्यतया शरीरमा क्यान्सर भएको अंग वा तन्तुका आधारमा क्यान्सरको प्रकार विशेषलाई नाम दिइन्छ ।
एक तिहाइ नेपाली गर्छन् सुर्ती उपयोग
क्यान्सर हुने प्रमुख जोखिम तत्त्व धूमपान र सुर्तीको उपयोग हो, जसको अवस्था हाम्रो मुलुकमा विकराल छ । ईडीसीडीका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको लगभग ३१ प्रतिशतले हाल सुर्तीजन्य पदार्थ उपयोग गर्छन् । तीमध्ये पुरुष ४८.१ प्रतिशत छन् भने बाँकी महिला । यस्तै, जनसंख्याको करिब १८.५५ हाल धूमपान गर्छन् । दिनहुँ धूमपान गर्ने १५.८ प्रतिशत छन् । तीमध्ये १०.३ प्रतिशत महिलाले धूमपान गर्छन् । यति मात्र नभई एक तिहाइभन्दा बढी अर्थात ३६.१प्रतिशत जनसंख्या दोस्रो तहको धूमपान प्रभावमा पर्ने गरेका छन् ।
शारीरिक निष्क्रियता बढ्दो
हाम्रो मुलुकको कुल जनसंख्याको ३.५ प्रतिशत शारीरिक रूपमा पूर्ण निष्क्रिय हुने गर्छन् । सहरी क्षेत्रमा यस्तो निष्क्रियता बढी छ । ५३.६ प्रतिशत व्यक्ति सिफारिसअनुसार गर्नुपर्ने शारीरिक गतिविधिमा सहभागी पनि हुँदैनन् ।
मुलुकमा सागसब्जी र फलफूलको सेवन एक सातामा औसत दुई पटक हुने गर्छ । करिब ९९ प्रतिशत मानिस प्रस्तावित गरिएअनुसारका सागसब्जी र फलफूल खाँदैनन् । जवान व्यक्तिमा फास्टफुडको प्रयोग गम्भीर रूपमा बढ्दै गएको छ । नुन पनि दिनहुँ ११ ग्रामजति सेवन गर्नुपर्नेमा त्यसको दोब्बर उपयोग गरिन्छ ।
क्यान्सरको जोखिम कम गर्न
धूमपान वा कुनै पनि रूपमा तमाखुको उपयोग नगर्नुस् : धूमपानले दीर्घकालमा करिब आधा प्रयोगकर्तालाई मार्ने गरेको छ । यो फोक्सोको क्यान्सरसम्बन्धी एक मात्र सबैभन्दा ठूलो जोखिमको कारक त हुँदै हो, तमाखुको उपयोग अन्य विभिन्न क्यान्सरसँग पनि जोडिएको हुन्छ । फोक्सोको क्यान्सर मात्र नभई पाचक ग्रन्थि (प्यांक्रियाज), घाँटी, मूत्राशय, पेट, मिर्गाैला, पाठेघरको मुखलगायत क्यान्सरसँग समेत धूमपानको नाता छ । तपाईं धूमपान गर्नुहुन्छ भने यो कुलत जति चाँडो छोड्नुहुन्छ, तपाईंको आयु त्यति नै बढ्दै जान्छ ।
अम्मल त्यागेको एक दशकपछि पूर्वधूमपानकर्ताको फोक्सोको क्यान्सरले गर्दा मृत्यु हुने जोखिम आधामा झर्छ । तमाखु जुनसुकै हिसाबले उपयोग गरे पनि क्यान्सरको जोखिम बढ्दै जान्छ । हाम्रो मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थअन्तर्गत धूमपान वा विभिन्न प्रकारले सुर्तीको उपयोग गरिन्छ, जस्तो : चुरोट, बिंडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा तथा कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुटखा, नस ।
अपरोक्ष धूमपानबाट बच्नुस् : यदि तपाईं धूमपान गर्नुहुन्न भने पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन । जतिखेर धूमपान नगर्नेहरू धूमपान गरिरहेका व्यक्तिछेउ बस्छन्, विभिन्न शारीरिक समस्यासँगै क्यान्सरको जोखिममा समेत पर्छन् । यसैले अपरोक्ष धूमपानको दुष्प्रभावबाट बच्न आफ्नो घर र कार्यस्थललाई समेत धूमपानमुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ । अपरोक्ष धूमपानको कुनै पनि मात्रा सुरक्षित मानिँदैन ।
शारीरिक रूपमा सक्रिय रहनुस् : दिनहुँ न्यूनतम आधा घण्टा मध्यमखाले शारीरिक गतिविधि गर्नुपर्छ । एकै ठाउँ बसिराख्नुपरे पनि नियमित अन्तरालमा हिंडडुल गर्नुस् । निरन्तर बसिनराख्नुस् । शारीरिक रूपमा सक्रिय रहेर स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउँदा क्यान्सरको जोखिम कम हुँदै जान्छ ।
शरीरको तौल धेरै बढ्न वा घट्न नदिनुस् : आफ्नो उचाइ, लिंग आदिबमोजिम उपयुक्त शारीरिक तौल राख्नु क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने अर्को प्रभावकारी उपाय हो । उपयुक्त तौल र जीवनशैली अपनाउनेमा प्रस्तावित तौल र जीवनशैली उपयुक्त नभएकाको दाँजोमा क्यान्सरको सम्भावना १८ प्रतिशत कम हुन्छ । यसैले उमेर, उचाइ, लिंगलगायत आधारमा आफ्नो उपयुक्त शारीरिक तौल पत्ता लगाएर त्यसलाई स्वस्थकर बनाउने रूपमा कायम राख्ने प्रयास गर्नुस् ।
स्वस्थकर आहार लिनुस् : तपाईंले लिने आहारले स्वास्थ्यमा शक्तिशाली प्रभाव पार्छ । चिनी, नुन र बोसो धेरै भएका खाद्यपदार्थको सेवन सीमित गर्नुस् । फलफूल, सागसब्जी, सम्पूर्ण अन्न, दालको मात्रा बढाएर स्वस्थकर जीवनशैली अँगाल्नुस् । रातो मासुको उपयोग नियन्त्रण गर्नुस् । ‘प्रोसेस्ड’ मासु उपयोग गर्नबाट बच्नुस् । रातो मासु कोलोरेक्टल क्यान्सर उत्पन्न गर्ने कारकसमेत मानिएको छ । धेरै मात्रामा रेशायुक्त खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुस् । विभिन्न अध्ययनअनुसार फास्टफुड र पश्चिमा तरिकाको आहारले शरीरको तौल बढाउनुका साथै मोटोपना निम्त्याउन सक्छन्, जुन १२ किसिमका क्यान्सरसँग सम्बद्घ हुन्छन् । चिनी, मीठो पेयपदार्थ उपयोग गर्दा तौलमा वृद्घि हुन्छ । प्लास्टिकको बट्टा वा बोतलमा राखिएका खाद्यपदार्थ सेवन नगर्नुस् । ढुसी परेको खाना नखानुस् । सकेसम्म विषादीरहित फलफूल र सागसब्जी खानुस् । भान्सामा नियमित उपयोग गरिने अदुवा, लसुन, प्याज, बेसारजस्ता मसला नियमित रूपमा भरसक काँचै खाने गर्नुस् ।
मद्यपानबाट परै बस्नुस् : मद्यपान गर्दा मुख, अन्न नली, घाँटी, ठूलो आन्द्रा, कलेजो, स्तन आदिको गरी कम्तीमा सात प्रकारका क्यान्सर हुन सक्छन् । क्यान्सर नहोस् भन्न मद्यपान नगर्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो । मदिराको कुनै सुरक्षित मात्रा नरहेको तथ्य हाल विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित भइसकेको छ । यसैले मद्यपान गर्नेहरूले यसको उपयोग कम गर्नुपर्छ । तपाईं मद्यपान जति कम सेवन गर्नुहुन्छ, त्यति नै क्यान्सरको जोखिममा समेत कमी आउँछ ।
प्रदूषणबाट जोगिनुस् : हालको सहरीकरणले सबैलाई प्रदूषणको चपेटामा पारेको छ । त्यसैले सकभर प्रदूषणबाट बच्ने प्रयास गर्नुस् । यसो गर्दा क्यान्सरको जोखिम कम हुन सक्छ ।
खोप लगाउनुस् : केही व्यक्तिमा संक्रमणसँग सम्बद्घ क्यान्सर हुन सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा सबै क्यान्सरको करिब पाँच भागको एक भाग संक्रामक कारक ब्याक्टेरिया, भाइरसलगायतले गर्दा हुन्छ । हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमणले कलेजोको क्यान्सरको जोखिम बढाउछ । एचपीभी संक्रमणले पाठेघरको मुख, लिंग र अन्य क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ । त्यसैले हेपाटाइटिस ‘बी’, हयुमन पापिलोमा भाइरस लगायत खोप लगाउनुपर्छ ।
क्यान्सर स्क्रिनिङमा सहभागी हुनुस् : मानव शरीरमा देखिने केही क्यान्सरलाई लक्षण देखिन थाल्नुअगावै उपचार गर्न सकिन्छ । यसैले नियमित रूपमा क्यान्सर स्क्रिनिङमा सहभागी हुनुपर्छ ।
क्यान्सर उत्पन्न गर्ने कारकको सम्पर्कमा नरहनुस् : हालसम्म थाहा पाइएका क्यान्सर उत्पन्न गर्ने कारकहरू जस्तै एसवेस्टस, रेडोन, आर्सेनिक आदिको सम्पर्कमा रहनु हुँदैन ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०९:२०
अमेरिकामा रोकिएन प्रदर्शन
अपडेटः बिहीबार, २२ जेठ, २०७७ । १२ : १५ बजे